Ama-Anime Angaqinisekile Anamalayisense E-Sketchy ENtshonalanga - Okunye
Ama-Anime Angaqinisekile Ngezinye Zamalayisense Ahle Kakhulu Emakethe YaseNtshonalanga
Amakhredithi wesithombe afakiwe: zerochan.net
Iziqu eziningi zinamalayisense bese zikhohliwe ngenkathi ezinye zize zingabi nalayisense naphezu kwesidingo nokuthandwa. Lo mbhalo ubheka amalayisense ayi-10 okwamanje angaqinisekile emakethe yaseNtshonalanga.
1 - Ukhonkolo Revolutio
Umthombo Wezithombe: Iwebhusayithi Esemthethweni
Kunikezwe ilayisensi yi-FUNimation isikhashana emuva, asikaze sizwe lutho ngalesi sihloko selokhu saqeda ukusakazwa. Ngenkathi i-FUNimation ithathe isikhathi sayo phambilini futhi kungashiwo ukuthi kungenzeka ukuthi ingavumela umuntu onamalayisense abamkhokhele imali enhle ukuze avele, kubonakala kumangaza ukuthi ayikho inqubekela phambili eyenziwe ngalesi sihloko, nhlobo.
Mhlawumbe uhlangothi lwezinto lwaseJapan luphethe ukukhishwa kepha kunento eyodwa eqinisekile, isikhathi esibekiwe sokukhishwa kweConcrete Revolutio sibonakala siphela.
2 - iGintama
Enganakwa kakhulu eNtshonalanga, uGintama wagcina ethole ukukhishwa kwakhe kokuqala ezindaweni zaseNtshonalanga lapho iSentai Filmworks ikhipha iziqephu zokuqala ezingama-49 kwiDVD enesihloko esithi 2010 nango-2011.
Ekugcineni, ibhayisikobho egqwayizayo izophinde ibone nokukhululwa, kulokhu kubizwe ngesiNgisi, nguSentai; kodwa kusukela lapho abakakhiphi nempahla eyodwa yakwaGintama. Kuphephile ukucabanga ukuthi i-franchise, ku-ajenda kaSentai, ifile. Kepha-ke ithemba lisanda kuvuselelwa kubalandeli ngenkathi uCrunchyroll eqala ukukhipha iziqephu ezibiziwe zochungechunge bese kuthi iFUNimation yenze ukukhishwa kweDVD / BD kwenqwaba yeziqephu zakamuva.
Manje yini inkinga? Inkinga ukuthi iFunimation ikhishwe kuphela iziqephu ezivela ezingxenyeni zokugcina zochungechunge, hhayi ekuqaleni.
Ngakho-ke manje sineziqephu ezingaphezu kwekhulu uCrunchyroll avumile ukuthi azinamalungelo, singacabanga nje ngenxa yokuthi uSentai ubambelele kwilayisense abangasayisebenzisi, bengazi ukuthi bayoke babizwe yini, ingasaphathwa eyokudedelwa kwimidiya ebonakalayo.
Ukungasho ukuthi kungahle kungafanele ngisho nokuzikhipha ngokwezezimali lezo ziqephu yize lokhu kuyinto eyaziwa nguCrunchy noFuni kuphela ngalesi sikhathi.
3 - uLyrical Nanoha
Umthombo Wezithombe: Ithathwe ochungechungeni lwe-Lyrical Nanoha TV
Kokubili isizini yokuqala neyesibili ye-franchise banikezwe ilayisense yiGeneon Entertainment futhi bakhishwa nge-dub maphakathi no-2000s ngasekupheleni.
Kusukela kokuwa kwemakethe ye-anime, akukho okunye ukuthuthuka okulandele i-Nanoha franchise entshonalanga. I-StrikerS, zombili izinkathi zeVivid kanye nama-movie ahlala ngaphandle kokukhululwa ngokomzimba, ingasaphathwa eyodoti, futhi konke esivunyelwe ukuthi sibeke izandla kuyimifudlana esemthethweni yezinye zalezi zihloko.
Njengoba i-franchise isenamandla noma yini engenzeka, kepha kungani kungenzeki okwamanje futhi kuzokwenzekani kunoma yiluphi uchungechunge namabhayisikobho angakhishiwe kungukuqagela kwanoma ngubani kuleli phuzu.
Kukhona nokuqagela ukuthi i-Aniplex ingahle ibandakanyeke yize bungekho ubufakazi obuphathekayo kulokho ngaphambili. Imisebe eyodwa yethemba ukukhishwa kweshashalazi laseNtshonalanga kwefilimu yeNanoha okubonakala kukhombisa ukuthi uhlangothi lwaseJapan lomkhakha okungenani lusenomdla emakethe yaseNtshonalanga.
4 - I-Fate / kaleid liner Prisma ☆ Illya 3rei !! (Noma isizini 4) + i-Movie
AbakwaSentai Filmworks banikwe ilayisense, baqanjwa futhi bakhipha amasizini amathathu okuqala alolu chungechunge eNtshonalanga. Isizini yesine ne-movie kusamele kukhishwe noma kunjalo futhi akukho zwi mayelana nelayisense yabo eyenziwe.
Akuqiniseki ukuthi kwenzekani ngaleli franchise. Kuyingxenye ye-Fate / franchise enkulu futhi ngenxa yalokho kubonakala kungenakwenzeka ukuthi kungabi nzuzo noma kushiywe.
UCrunchyroll noSentai bebelwa ngeziqu kungekudala nje futhi mhlawumbe yiFUNimation, ngeCrunchyroll, manje enamalungelo okungena okusha kwale franchise kodwa uma kunjalo, kungani bengakhulumanga ngakho.
Vele, iFunimation ikhombise ukungabi nanhlonipho okukhulu uma kukhulunywa ngamatayitela abawakhipha ngezinye izinkampani njengoba sibonile isixwayiso esincane kuKabaneri we-Iron Fortress neRe: Zero. Noma omunye kamuva aqinisekiswa ngokukhululwa ngokomzimba kanti iRe: Zero isivele iveziwe ukuthi inebhizinisi emisebenzini.
Okwamanje, akukho zwi lokuthi kuzokwenzekani nganoma yimuphi umsebenzi wesikhathi esizayo walesi sigaba se-franchise kanye nomnqamulajuqu womuntu omemezela ukuthi unelayisense uyaphela ngokushesha.
5 - Isikhathi se-Phi-Brain 3
Umthombo Wezithombe: Ikhasi lika-Crunchyroll lochungechunge
Zombili isizini yokuqala neyesibili zakhishwa kwi-BD neDVD ene-dub yi-Sentai Filmworks kodwa lokho kwabuyela emuva ngo-2013. Kusukela lapho, isizini yesithathu neyokugcina, yize inelayisense, ayikaze ikhululwe noma kukhulunywe ngayo yiSentai ngomzimba abezindaba.
Mhlawumbe singaqagela ukuthi isizini yokuqala neyesibili bezingathengisi kahle ngokwanele ngakho-ke banqume ukuhlala kwilayisense kodwa ubungacabanga ukuthi bazoyikhipha noma kanjani ukubuyisa izindleko.
Vele, uSentai uthe noma yini abaqala ukuyibhuqa bazobona noma ikuphi okulandelayo noma i-spin-off nayo izothola i-dub futhi ngenxa yalokho kungenzeka ukuthi banqume ukuthi uma isizini yesithathu ingafanele ukubhujiswa, bekungafanele ikhululwe nakancane. Yize i-dub noma cha, kusabonakala kunelukuluku lokuthi ngenkathi uSentai esusa izihloko zabo kusuka ku-Anime Network kuya ku-HIDIVE, isizini yokuqala neyesibili yochungechunge zombili zidluliselwe kodwa isizini yesithathu azizange.
Kubukeka kungeke kwenzeke okwamanje ukuthi sizobona ukukhishwa ngokomzimba kwalesi sihloko kungekudala kepha okucasula kakhulu ukwenqaba kukaSentai ukuvuselela abalandeli ngalesi simo.
6 - uRock Lee namaNinja Pals akhe
Umthombo Wezithombe: I-TV Tokyo
Emuva ngo-2012, i-VIZ ilayisensi, yaqanjwa yabe isakaza i-Rock Lee ne-Ninja Pals yayo kodwa ngokungafani nezinye izakhiwo ze-Naruto franchise, ayikaze ibone ukukhululwa ngokomzimba.
Ngisho i-Australia (Through Madman Entertainment) isikhiphe isihloko kuvidiyo yasekhaya; yize kuphela kwi-DVD.
Kubukeka kungajwayelekile ukuthi i-VIZ ayikaze yenze lutho ngalokhu, mhlawumbe izinombolo zokusakaza zazingalungile, kepha okwamanje kubonakala sengathi ukukhishwa ngeke kuvele, noma cha kusuka ku-VIZ okungenani.
7 - Boruto: Naruto Izizukulwane Ezilandelayo
Ukungena okusha okuthandwayo efrijini leNaruto, iBoruto, kubonakala kuzokwenzeka ukuthi kukhululwe ngokomzimba ngesikhathi esithile. Noma kunjalo, ukuntuleka kwanoma yiluphi ulwazi kulolu chungechunge kuyaphazamisa ngandlela thile.
I-VIZ iphethe ilayisense kaBoruto namalungelo wokukhululwa ngokomzimba nawo. Ngenkathi isakazwa bukhoma ku-Crunchyroll, azikho izindaba ze-dub noma zokukhishwa kwevidiyo yasekhaya; ngisho nesiqinisekiso sokuthi amaphrojekthi anjalo asemisebenzini.
Ngenkathi sibonile ngokuphathwa kweFunimation kweDragon Ball Super kanye nokuphathwa kwe-VIZ kweHunter x Hunter ukuthi uchungechunge oluphakeme kakhulu lungahlala luthule baze bakulungele ukukhipha, kusengaba ukulinda isikhathi eside nokungaqiniseki kwabalandeli.
Uma bekufanele ngibheje, kuzomenyezelwa ukukhululwa ngokomzimba noma ngemuva kokuphasa isiqephu se-100 noma lapho amasethi eDVD eShippuden eseqedile ukukhishwa kwawo.
Zombili izinkathi zonyaka zeStrike Witches kanye ne-movie zinikezwe ilayisensi, zaqanjwa futhi zakhishwa yiFunimation kanti uchungechunge olusha lweBrave Witches seluthole udoti futhi cishe sekuqinisekisiwe ukubona ukukhishwa kungekudala. Kepha kuthiwani ngomcibisholo Wokunqoba Kokusebenza kwe-OVA ka-2014?
I-Funimation ayinikanga ilayisensi futhi ayikaze isho i-OVA futhi nomlando wayo ongalingani nama-OVA wama-franchise asunguliwe kanye nesikhathi esidlulile selokhu yakhululwa, kwenza kungabazeke ukuthi siyoke sikhululwe ngokomzimba le ngxenye ye-franchise .
9 - Igazi +
Umthombo Wesithombe: Okwenziwe nge-IG okokuphromotha
Lolu chungechunge lwaqala ukukhonjiswa ngo-2005 lwathola indlela olwalubizwa ngalo, olwabizwa ngokuthi, kuma-TV aseMelika ngo-2007. Labe selikhishwa nge-DVD ngokwamavolumu okuhlala kungaphelele kuze kube namuhla labe selikhishwa ngamasethi ama-episodes amabili, angama-25 ngo-2009.
Womabili la masethi manje awasanyatheliswa. Asazi namanje ukuthi kuzokwenzekani ngalolu chungechunge: Uma luzophinde lubuye, uma luzokhipha i-BD nokunye ... Kepha ngo-Sony, ophethe ilayisense, esethenge i-Funimation, mhlawumbe lokhu kuvula okusha amathuba esikhathi esizayo esiseduze; noma kunjalo abalandeli bathemba.
10. - Mushishi: Isahluko Esilandelayo (Noma Isizini 2)
UMushishi wanikwa ilayisensi yiFunimation, waqanjwa futhi wakhishwa ngo-2007 - 2008 emananini, wabe esefakwa ebhokisini elalisethwe ngo-2008 futhi ekugcineni, washaya iSAVE Edition ngo-2011.
Isizini yokuqala kodwa, ayikhishwanga kabusha kwi-blu-ray futhi kubukeka mancane amathuba okuthi ibone ukwelashwa okunjalo kungekudala. Uchungechunge lweMushishi ekugcineni lwabona ukulandelana okukhethekile kwehora eli-1 (Hihamukage), uchungechunge olulandelanayo (Isahluko esilandelayo) ne-movie (Adapting the arc last of the manga); konke okunikezwe ilayisense yi-Aniplex kepha akukaze kukhishwe.
Njengamanye amalayisense amadala e-Aniplex, nathi asikaze sizwe lutho ngakho.
Ngesinye isikhathi, iMadman Australia ibikleliswa ukukhishwa kwesizini yesibili futhi ikhombisa ukuthi iqukethe idub, kepha lokhu kufakwa ohlwini kwasuswa kungakapheli izinsuku.
Njengoba isikhathi esiningi sesidlulile, uMushishi engathandwa (noma okungenani engaholi kahle ngokwanele ezinkampanini ezinkulu ukuba zinakekele) ilungelo lokuthenga entshonalanga kanye nezimpawu eziningi eziphikisanayo ngesimo selayisense, kungukuqagela kwanoma ngubani ukuthi uMushishi wonke uyoke abe khona akhululwe.
Yilokhu, okwamanje okungenani. Kunezihloko eziningi ezingabaleki esimeni esifanayo futhi mhlawumbe ngizokwenza enye indatshana ngesihloko ngesikhathi esithile. Kepha okwamanje, ngifuna ukudlulela ezifundweni ezahlukahlukene.
Njengenjwayelo, uma unolwazi noma umbono ngezihloko ezilandelayo nesimo sabo, unganqikazi ukuphawula.
Lo mbhalo ubhalwe nguGabriel Persechino-Forest kusuka I-Sakura Anime News Blog.
Amalayisense Angaqinisekile (Ingxenye 1)
Amalayisense Angaqinisekile (Ingxenye 2)